शान्तिको हलो क्रान्ति !, जसले हलो जोतेर सबैलाई चकित पारिन् ! – onlinedarpan:
जीवनशैली सूचना / प्रविधि
Posted on October 11, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 281 Views
नेपाल महिला संघकी जिल्ला अध्यक्ष शान्ति बोहरा पुजाराले आफ्नै खेतबारीमा हलो जोतेकी छन् ।सुर्मा गाउँपालिका वडा नम्बर-१, लकुण्डमा रहेको माइती गएको समयमा गाउँका सबैले आलु लगाउनका लागी बाँझो खेत जोतिसकेको र आफ्नो माइतीको मात्रै बाँकी रहेको, घरमा हलो जोत्न सक्ने कोही पनि नभएका कारण आफूले हलो जोतेको पुजाराले बताइन् ।
पुजाराका दुई भाईहरु छन् । एक जना शिक्षक र एक जना नेपाल आर्मीमा छन् । खेतबारीमा काम गर्न अरुको सहयाता लिनु पर्ने बाध्यता उनको माइतीघरमा छ ।
‘म माइत गएको समयमा हलो जोत्ने काम मैले गर्छु’ पुजाराले बताइन् । २०४४ सालमा बुबा नरपति बोहराको निधनपछि घरको कामको जिम्मा मेरो काँधमा आएको थियो । मैले २०४५-४६ साल तिर हलो जोत्न सुरु गरेकी थिएँ,’ पुजाराले भनिन् ।
भाईहरु ठूला भएपछि पुजाराले हलो जोत्ने काम छोडिन् । उनले विवाहपछि पनि हलो जोत्ने काम गर्नु परेन । कहिलेकाहीँ भाइहरु थाकेको समयमा उनीहरुलाई आराम दिन केहीबेर पुजाराले हलो जोत्ने गर्थिन् । त्यसदिन पनि घरमा भएका बुहारीहरु पनि हलो जोत्ने मान्छे नभएकाले आलु रोप्नका लागि बाँझो छोडेको जमीन बाउसोले खन्दै थिए । पछि उनले गएर हलो जोतिन् ।
पुजाराले भनिन्, ‘हाम्रो समाजमा महिलाले हलो जोत्दा अनिकाल लाग्ने, घरमा नराम्रो हुने भन्ने अन्धविश्वास अझै पनि छ । तर मेरो परिवारका कसैले त्यस्तो मान्दैनन् । मलाई हलो जोत्न दिन्छन् । बुबाले पनि मलाई सानैमा केटा मान्छेले गर्ने काम बढी सिकाउनुहुन्थ्यो । हलो बनाउन, फाली, गाड्न सबै काम मलाई आउँछ ।’
गलत सामाजिक मान्यता र कुसंस्कारका कारण महिलाहरु धेरै पीडामा रहेको पुजाराको भनाई छ । महिलाहरुले हलो जोत्दा अनिष्ट हुन्छ भन्ने मान्यता अहिले पनि कायमै रहेको समाजमा कोहीले प्रशंसा गरेका छन् भने बुढापाकाले भने गाली गर्ने गरेको पुजाराले बताइन् ।
सबैका पुरुष सधै घरमा हुँदैनन’ उनले भनिन् ‘पुरुष घरमा नभएका महिलाहरुले आफन्तलाई हार गुहार गरेर हलो जोति माग्नु पर्ने बाध्यता अहिले पनी बझाङका धेरै महिलाहरुको छ । हलो जोतिदिएकै भरमा पुरुष घरमा नभएका महिलाहरुले विभिन्न खालका यौनजन्य हिंसा र थिचोमिचो सहनु परेको छ । अब मैले मात्र होईन यहाँका सबै महिलाहरुले हलो जोत्न सक्नु पर्छ ।’ पुजाराले भनिन्।
सुरुका वर्षमा महिलाले हलो जोत्दा खडेरी पर्छ, अनिकाल पर्छ भनेर हल्ला फैलाए पनि त्यस्तो केही नभएपछि सबै चुपचाप बसेको उनले बताइन् । महिला हिंसाको एउटा कारण यो पनि भएको उनको भनाई छ । यसको अन्त्यका लागि अहिलेका जनप्रतिनिधि महिलाहरुले पनी हलो जोत्न जरुरी रहेको उनले बताइन्।
बोहरा नेपाल महिला संघकी जिल्ला अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति बझाङकी सदस्य हुन् । पुजारा एकल महिला पनि हुन् ।
बझाङका एकल महिलाहरुले अरुको भरमा नै खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउने पुजाराले अब एकल महिलाहरुले पनि हलो जोत्न तम्सिनु पर्ने र यसबाट कुनै क्षति भए त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिन तयार रहेको बताइन् । उज्यालो अनलाइनबाट
Posted on November 21, 2018 Author onlinedarpan
Share0TweetGoogle+Pin00sharesबल, बैंश र सौन्दर्य सधै एकनास रहँदैन । जीवन जति-जति छोटो हुँदै जान्छ, यी कुरा पनि क्रमस खिइदै जान्छ । शिथिल हुँदै जान्छ । अनि बुढ्यौलीले छोप्छ । बल सकिन्छ । बैंश रित्तिन्छ । सौन्दर्य निखि्रन्छ । साथसाथै हाम्रो अनुहारको चमक, ओज हराउँछ । मान्छेको मनोविज्ञान के हुन्छ भने, आफुलाई सधै जवान देखाउने । सधै विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
दुर्भाग्यको कारण बन्न सक्छ घरमा राखिएको यस्ता चीज
Posted on November 18, 2018 Author Manoj Phuyal
Share17TweetGoogle+Pin017sharesएजेन्सी : वास्तुशास्त्रका अनुसार घरमा राखिएको हरेक वस्तुले घरलाई र घरका सदस्यलाई प्रभावित गर्ने गर्छ । तीमध्ये भित्तेघडी पनि एक हो । भारतका ज्योतिषाचार्य पं प्रफुल्ल भट्टका अनुसार घडीले तपाईंको सफलताको बाटो खोल्न पनि सक्छ र बन्द पनि गर्न सक्छ । यदि यससँग जोडिएका वास्तुका केही सजिला कुरा ध्यानमा राखे तपाईंको खराब समयलाई राम्रो बनाउन विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Posted on November 19, 2018 Author onlinedarpan
Share18TweetGoogle+Pin018sharesएजेन्सी । हाम्रो समाजमा हरेकका घर घरमा तुलसीको मठ र बिरुवा हुने गर्दछ । तर के तपाईलाई थाहा छ तमाम गुणले भरिएको तुलसीको बिरुवा कुन दिशामा हुनुपर्दछ ? सहि दिशामा तुलसी रोप्नाले यसले शुभ फल दिन्छ। तर गलत ठाउँमा रोप्नाले दोष पनि लाग्न सक्छ। वास्तु अनुसार यस दिशामा रोप्नुहोस् तुलसी तुलसीको बिरुवा भूलेर पनि दक्षिण विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
मायामा पर्दा स्वास्थ्यमा हुन्छन् यस्ता ९ फाइदा !
रसुवामा टिपर दुर्घटना, दुईको मृत्यु, तीन घाइते